Fanalahidy 1 tsara indrindra handrefesana mora foana ny KJM-L8 ——Fitsapana ny fanerena ny ra / mpamokatra sy famokarana miorina amin'ny fianakaviana | FuluoEr
Telefaona: +86 18079131929
Fanaraha-maso ny tosidra
Meteran'ny glukose ao anaty
3L Fananana oksizenina ao an-trano ...
5L Concentrra Oksizena Medaly ...
Lakile 1 handrefesana mora foana ny KJM ...
Oxyge azo entina an-trano 2L ...
Lakile 1 handrefesana mora foana ny KJM-L8 —— Fitsapana ny fanerena ny ra / ny fiandrasana ny fianakaviana
Sphygmomanometer elektronika karazana hato-tanana KJM-L8
Fandefasana feo, feo azo ovaina, efijery lehibe famaritana avo
Mombamomba ny vokatra Miorina amin'ny fitsipiky ny famolavolana oscillographic, ity vokatra ity dia afaka refesina haingana, marina ary azo antoka ny tosidranao.
Laharana maodely ： KJM-L8.
Ity vokatra ity dia fitaovana fandrefesana tosidrà elektrônika izay afaka mandrefy ny tosidra systolika, ny tsindry ambany diastolika ary ny tahan'ny fo miaraka amin'izay. Ity vokatra ity dia mifototra amin'ny fitsipiky ny famolavolana oscillometric, ary afaka refesina haingana ny tosidranao, marina ary azo ianteherana. Sehatra fampiharana: Mety amin'ny olon-dehibe ihany ity vokatra ity. Tontolo iainana fampiharana: Ity vokatra ity dia mety amin'ny fampiasana fianakaviana na klinika.
Fanitsiana ny volavola: Tombony lehibe amin'ity vokatra ity ny manitsy ny haavony. Sarin'ny vokatra: efijery fampiratiana nomerika LCD, efijery HD lehibe ary famakiana mazava.
1. Fampitana am-peo Azonao atao ny manitsy ny haavony
2. efijery nomerika LCD fampisehoana, efijery lehibe famaritana avo lenta,
3. Algorithma Core SOC, fandrefesana marina kokoa
4. Fandidiana iray, faneriterena manan-tsaina
5. Fanaraha-maso tsy tapaka ny pulsa
Lanja mavesatra: 161g haben'ny fanomezana: 80 * 80 * 90MM habetsaky ny fonosana: 50 PC ny haben'ny fonosana: 42 * 41.5 * 20.0CM Lanjany feno ny boaty iray manontolo: 8.8KGS
Fepetra fandrefesana: tanana
Fatra fandrefesana: tosidra 0 ~ 280mmHg (0 ~ 37.3kpa), tahan'ny famonoana 40 ~ 195 kapoka / min
Fandrefesana ny halaviran-tànana: 13.5 ~ 21.5cm
Fahamarinana fandrefesana: sanda amin'ny tosidrà ± 0.4kpa (± 3mmHg), sanda famakiana pulse 5%
Tontolo iainana miasa: mari-pana miasa: 10 ℃ ~ 40 ℃;
Ny hamandoana amin'ny asa: 40% ~ 85%
1. 99 mametraka vondrona fitadidiana:. Ho an'ny olona 2 misy daty sy ora
2. Fatra refesina: tsindry: 0-299mmHg (0-39.9kPa) Taham-piadiana: 40-180times / min.
3. Fahamarinana: tsindry: ± 3mmHg (ao anatin'ny ± 4kPa). Taham-pielezana: ny marina dia 5%
4. Asehoy: fampirantiana kristaly ranoka nomerika
5. Batterie: bateria alkaly roa
6. Feo mivantana (tsy voatery)
7. Ny androm-piainan'ny bateria: in-300 ambanin'ny fatran'ny bateria alkaly 7 misy 23 ℃.
8. Ny mari-pana miasa: 5.0 ka hatramin'ny 40.0 ° C, -85% RH
9. Temperatura fitehirizana: -20,0 ka hatramin'ny 60,0 ° C, -95% RH
10. refy: 115x96 x59mm
11. lanja: 180g (esory ny lanjan'ny bateria)
12. Tapaka ny herinaratra mandeha ho azy: tapaka ny herinaratra raha tsy miasa mandritra ny 8 segondra
K9000 dia taranaka mpamokatra oksizenina azo entina vaovao, modely SK9000, milanja 2.5kg eo ho eo, azo ampiasaina amin'ny fiara na ao an-trano, mpiorina oksizenina tena lamaody sy mety.
SK9000 dia manana asa lehibe 12 hiarovana ny ain'ny fianakaviananao sy ny fahasalamanao. Ny famolavolana fampiasa dia tena mpampiasa-namana, fikorianan'ny oxygen 2L, asan'ny atomisation, fiasan'ny fotoana, compresseur avo lenta, fihenan'ny tabataba lalina, efijery fampiasa famaritana avo lenta, fanadiovana ionona oksizenina ratsy, tsy fahombiazan'ny fanairana, fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby, sivana fito sosona fanadiovana, mety ho an'ny vehivavy bevohoka, sieve molekiola nafarana, sns., tanteraka tanteraka ny fiasa.
Ny fikorianan'ny oxygen 2L an'ny SK9000 dia azo ahitsy, ary azonao atao ny manitsy ny fikorianan'ny oksizenina mifanaraka amin'ny vatan'ny tena araka ny sitraponao. Ankoatry ny fampiasana azy an-trano dia azonao atao koa ny mitondra azy na aiza na aiza alehanao, mampifandray ny fahasalamana amin'ny lafim-piainanao rehetra. Mazava ho azy, tena tsotra ihany koa ny fampiasana azy. Voalohany dia ampidiro ny adaptatera amin'ny fiara, avy eo dia tsindrio mandritra ny fotoana lava mba hamadihana ny fomba fampiasana, ary farany dia nametraka inhaler ôksizena ianao mba hitsoka mora foana ny oxygen.
SK9000 dia azo ampiasaina amin'ny olona maro ihany koa, mba hahafahanao sy ny fianakavianao ho tony kokoa ary hampiasa izany amin'ny fiadanan-tsaina. Ireo zokiolona, ​​vehivavy bevohoka, mpianatra, mpiasa fotsy volo, sns. Dia afaka mampiasa izany amin-toky.
SK9000 dia nandalo ny fanamarinana roa an'ny FDA / CE, ary ny kalitao dia notsapaina tamin'ny ambaratonga samihafa. Mino aho fa ho mpiara-miasa matoky tena amin'ny fiainanao!
Sary antsipirian'ny vokatra
Teo aloha: 2L mpiorina oksizenina ao an-tokantrano SK9000 mpamokatra ôksizenina mitaingina fiara
Manaraka: 5L Medical Oxygen Concentrator SD-05W —— Fampisehoana oksizenina amin'ny fotoana tena izy, hita ny vokatry ny fitsaboana oksizenina
Fanaraha-maso ny tsindry 24 ora
Fanaraha-maso ny tosidra mandeha ho azy
Fanaraha-maso ny tsindry ra
Rafitra fanaraha-maso glukosa
Sphygmomanometer elektronika ambony sandry [Model n ...
YM2T9 Fetal Favorite
Wrist Electronic sphygmomanometer [Model numbe ...